Fuel Level woluvo Manufacturers - China Fuel Level woluvo Factory & Suppliers
Ibangele Level woluvo JT606
Ibangele Level woluvo JT606D
Ibangele Level woluvo JT606X
Ibangele Level woluvo JT550
Patent Product, Best Choice Kuba Remote yezibaso oQhelekileyo oSetyenziswa Monitoring.
JT606 series ngobuciko eliphezulu isivamvo inqanaba kwamafutha yenzelwe ulawulo ekude ngocoselelo kwi amafutha. Le ziqulunqwe Jointech ngokuzimeleyo, zidibene ubugcisa woluvo ephezulu elimiweyo kunye, iiteknoloji ezintsha lobunikazi. Kusenokuba gqolo ukubona inqanaba ulwelo kunye nokugqama (<1mm), kwakunye ukulungisa ubude ukulingana amatanki oyile ezahlukeneyo ngoko nangoko, ze baphinde bayifake woluvo kwinqanaba kwamafutha kwezithuthi yokuqala ukudibanisa imitha amafutha yokuqala.
Design Unique, Utyekelo Amaxhwele
Ngokutsho iminyaka emininzi amava ukufakwa ndawo, rhoqo uphuculo, oku ukwenza JT606 unamandla onamandla ukuziqhelanisa ezahlukeneyo xaka mveliso kunye nezimbiwa bume.
Ngaba ndinqumle isivamvo yezibaso ayikwazanga kunqunyulwa ngokobungakanani itanki yamafutha kwisiza Musa nokumelana kubangelwa ubukhulu engalunganga
High-ngqo Recognition ukuchana lingaphantsi kwe 1mm Le woluvo ukuchonga kukuhla kunyuka kwinqanaba engaphantsi kwe 1mm
Simple ufakelo kuyilo elilodwa lomenzi flanges ezifuna elula Faka i woluvo akuyomfuneko omnye elinesibini imingxuma iqhosha lemenyu iqhosha Press ekulinganisweni ngokupheleleyo ziyalambatha kwisiza
Wide input ombane, aphezulu kunye yesekethe ukhuseleko 4-70V ububanzi igalelo lomqolo ombane, qiniseka ukuba woluvo ayikho phantsi yempembelelo ombane igalelo. Ukhuseleko Multi wesiphaluka, ukhuseleko uqhagamshelo umva, mfutshane ukhuselo wesekethe.
Multi-uphawu lwe output Voltage output (0-5V), imveliso ekhoyo (4-20mA) ukumelana output (0-500Ω) Digital uphawu lwe output: RS232, RS485 Makhe esweni ekude nokulawula ngoxa uqhuba lesikali imoto
Ngaphezu Hardware, Amava ngakumbi Ukwabelana
Jointech ayikho kumgangatho amafutha kuphela sensor umenzi, kodwa kwakhona ukunika isisombululo esweni sibaso umxhasi oversea iminyaka emininzi. Jointech sele efunde amava atyebileyo ukufakwa ndawo, sensor elidibanayo processing emhlabeni emva, kwaye uhlalutyo lwengxelo.
On indawo yokufaka kweliso
Ukuhlanganiswa device amava ukwabelana
Fuel analysis data ngesifo kunye nengxelo amava output ukwabelana
JT606 isetyenziswa ngokubanzi kwiintlobo ezahlukeneyo zezithuthi kunye noomatshini kwi ehlabathini.
Logistics zokuthutha truck